Ads - Myanmars.NET
လူပ်ိဳႀကီးးဘဝစြန္﻿႔လႊတ္﻿ရန္﻿(Lovers / ချစ်သူ မရှိသေးတဲ့ အမျိုးသားများ)07-07-2016	မျပည့္ေသာေရအိုးကိုမဖုန္းပါနဲ႔(Lovers / ချစ်သူ မရှိသေးတဲ့ အမျိုးသားများ)07-06-2016	Want love(Lovers / ချစ်သူ မရှိသေးတဲ့ အမျိုးသားများ)07-04-2016	want love(Lovers / ချစ်သူ မရှိသေးတဲ့ အမျိုးသားများ)07-04-2016	မိန္းမရွာ(Lovers / ချစ်သူ မရှိသေးတဲ့ အမျိုးသမီးများ)06-30-2016	Toyota Townace(Cars / Cars to sell)06-28-2016	TOYOTA GRANDE MARK2(REGALIA)(Cars / Cars to sell)06-26-2016	အိမ္​​ေထာင္​ဖက္​႐ွာ(Lovers / ချစ်သူ မရှိသေးတဲ့ အမျိုးသားများ)06-23-2016	Wealthy & Influential Sugar Mummy/ Sugar Daddy /Gay / Lesbia(Lovers / ချစ်သူ မရှိသေးတဲ့ အမျိုးသားများ)06-22-2016	buy(Cars / Cars wanted)06-22-2016	ေဇအမ(Lovers / ချစ်သူ မရှိသေးတဲ့ အမျိုးသားများ)06-22-2016	အလုပ္လုပ္ခြင့္ေလ်ာက္လႊာ(Phone / ဖုန်း၊ ဆင်းကဒ်၊ အပိုပစ္စည်း (အသစ်)/ new hand-sets)06-20-2016	Classified Ads
လူကြီးမင်းတို့ ရောင်းပန်း ဝယ်ပန်း ကောင်းစေဘို့၊ လွယ်လွယ်ကူကူ အချိတ်အဆက် မိစေဘို့ အတွက်၊ မြန်မာ့ အင်တာနက်မှ စမ်းသပ် စီစဉ် တင်ဆက်လိုက်ပါသည်။ (2014 beta)
New Ad | All Ads | My Profile | My Ads | Rules	Jobs (119) ဆေးပညာ ဆိုင်ရာ/ Medical (1) - ပညာရေး ဆိုင်ရာ/ Educational (2) - ကွန်ပျူတာ ဆိုင်ရာ/ Computing (11) - ရောင်းချရေး ဆိုင်ရာ/ sales and marketing (24) - ယာဉ်မောင်း/ driver (2) - ဟိုတယ် စားသောက်ဆိုင် / Hotels & Restaurants (15) - ခရီးသွား လုပ်ငန်း / Travel & Tours (9) - အင်ဂျင်နီယာ / Engineering (23) - All other job vancancies (30) - အိမ်အကူ / Housekeeper (2)	Phone (25) ဖုန်း၊ ဆင်းကဒ်၊ အပိုပစ္စည်း (အသစ်)/ new hand-sets (16) - ဖုန်း၊ ဆင်းကဒ်၊ အပိုပစ္စည်း (တပတ်ရစ်)/ Second-Hand (9)	Farming (0) စပါး ဝယ်မည် (0) - ကောက်ပဲသီးနှံ ဝယ်မည် (0) - စပါး/ သီးနှံရောင်းမည် (0)	Cars (385) Cars to sell (261) - Bus & trucks to sell (7) - Motorcycle to sell (0) - Cars to rent (0) - Cars wanted (117)	Housing (21) အိမ် ရောင်းမည် / Homes for Sale (11) - တိုက်ခန်း ရောင်းမည် / Apartments for Sale (6) - မြေကွက် ရောင်းမည် / Land for Sale (1) - အိမ်၊ရုံး ငှားမည် / Home, Office for Rent (1) - တိုက်ခန်း ငှားမည် / Apartments for Rent (1) - အမ်ခြံမြေ ဝယ်လို၊ ငှားလိုသည် / Wanted (1)	Shopping (4) ဖက်ရှင်၊ အလှကုန် (1) - ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ၊ အီလက်ထရောနစ် (1) - ရွှေ၊ လက်ဝတ် ရတနာ၊ နိုင်ငံခြားငွေ / Gold, ForEx (0) - ကုန်ပစ္စည်း မျိုးစုံ (အသစ်)/ Commodities (0) - ကုန်ပစ္စည်း မျိုးစုံ (အဟောင်း) / second-hand (2)	Lovers (590) ချစ်သူ မရှိသေးတဲ့ အမျိုးသားများ (511) - ချစ်သူ မရှိသေးတဲ့ အမျိုးသမီးများ (79)	Birthday/ Wedding/ Funeral (0) သာရေး/ Birthday/ Wedding (0) - နာရေး/ Funeral (0)	အခမဲ့ ပေးမည် / Free (23) Thanks to everyone who use this and who helped us make this happen. Good luck to everyone!
ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ အလုပ်ခေါ်စာများ (1728)
ဆေးပညာဆိုင်ရာ အလုပ်ခေါ်စာများ (82)
အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အလုပ်ခေါ်စာများ (83)
ရောင်းချရေးနှင့် ဈေးကွက်ဆိုင်ရာ အလုပ်ခေါ်စာများ (406)
စက်ရုံနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း အလုပ်ခေါ်စာများ (350)
စားသောက်ဆိုင် /ကုန် အလုပ်ခေါ်စာများ (804)
ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်ခေါ်စာများ (334)
We would like to resell the package of restaurant'equipment & accessories with negotiate . Any body ...	03-09-2016	200 Hit(s)	Fyoo	(Shopping / ဖက်ရှင်၊ အလှကုန်)
X9533445zydidisficicicuf"...	12-19-2015	269 Hit(s)	Internet line	(Shopping / ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ၊ အီလက်ထရောနစ်)
We would like to sell the internet line with the diamond package including all equipment and accesso...	03-09-2016	224 Hit(s)	Resell the Office'equipment & accessories	(Shopping / ကုန်ပစ္စည်း မျိုးစုံ (အဟောင်း) / second-hand)
We would like to resell the office'equipment and accessories . Anybody who interested to buy these i...	03-09-2016	209 Hit(s)	အိမ်ကြော်ငြာ အချို့
တာ​ေမြ တိုက္​ခန္​းအ​ေရာင္​း	(Housing / အိမ် ရောင်းမည် / Homes for Sale)
တာ​ေမြ ​ေရႊဗဟို​ေဆးရံု orange မ်က္​​ေစာင္​းထိုး ​ေဆးရံု ​ေစ်း ​ေက်ာင္​း မူႀကိဳ မီးသတ္​ ရဲစခန္​း တို႔...	700 MMK	09-27-2014	742 Hit(s)	နြယ္​​ေအးရပ္​ကြက္​၊နြယ္​နီလမ္​း၊၁၂​ေပခြဲ၅၀​ေပ၊တိုက္​သစ္​	(Housing / တိုက်ခန်း ရောင်းမည် / Apartments for Sale)
​ေစ်းနႈန္​းညိႈနိႈင္​းနိုင္​ပါသည္​...	320 MMK	08-22-2014	424 Hit(s)	အလုပ်ခေါ်စာ အချို့
လစာ / Salary	Date
job wanted	(Jobs / ရောင်းချရေး ဆိုင်ရာ/ sales and marketing)
I want to be assistant manager....	05-02-2016	57 Hit(s)	Receptionist	(Jobs / All other job vancancies)
Salary depends on english level.
Miyako Japanese Massage တြင...	11-16-2014	226 Hit(s)	ရောင်းရန်ရှိသည့် ကားအချို့
kluger v 2002ေရာင္းခ်င္ပါသည္	(Cars / Cars to sell)
7F/122...	225 MMK	05-12-2014	163 Hit(s)	Toyota Vitz	(Cars / Cars to sell)
အတြင္းအျပင္အလြန္သန့္,kilo 5****Tv original back camera,.ပစၥည္းစံု ,စတိနံပါတ္ ကားေ႐ာက္ျပီ...	86 MMK	08-14-2014	132 Hit(s)	ဖုန်းကြော်ငြာ အချို့
Fyoo	(Shopping / ဖက်ရှင်၊ အလှကုန်)
We would like to resell the office'equipment and accessories . Anybody who interested to buy these i...	03-09-2016	209 Hit(s)	Restaurant equipment & accessories	(Shopping / ကုန်ပစ္စည်း မျိုးစုံ (အဟောင်း) / second-hand)
We would like to resell the package of restaurant'equipment & accessories with negotiate . Any body ...	03-09-2016	200 Hit(s)	Who's Online